SORATAKO AMINNY FASIKA SA AMINNY VATO?
Tafaraka tany an’efitra hono ireto mpinamana roalahy, kinanjo nifanditra ihany teny an-dalana. Avy dia nasian’ilay iray tehe-maina ny anankiray ary dia nitsikasina teo amin’ny fasika. Narary tokoa izy, saingy tsy namaly fa nanoratra teo amin’ny fasika no nataony. Izao no vakin’izany:
"Androany aho dia nasian’ny sakaizako teha-maina"!
Rehefa niarina izy dia niaraka ihany indray avy eo, ary niampita renirano iray, saingy tsy nahatohitra ny herin’ny rano ilay voan’ny teha-maina ka saiky maty raha tsy novonjen’ilay anankiray. Rehefa tafakatra teny an-tanety izy, avotra soa aman-tsara, dia nanoratra indray izy teo amin’ny vato nanao hoe:
"Androany aho dia novonjen’ny sakaizako ka tsy maty"
Inona no antony nanoratan’ialahy tamin’ny fasika raha voan’ny teha-maina ialahy, ary inona no antony nanoratan’ialahy tamin’ny vato raha novonjeko ka saiky maty?, hoy ilay nanavotra azy,
Dia niteny hono ilay voan'ny teha-maina nanao hoe:
"Izao an, ny zavatra ratsy nataon’ny olona tamintsika, dia tokony hosoratana eo ambony fasika, mba ho ho fafan’ny rivotra sy ny riaka, tsy ho tsaroantsika intsony, fa ny zavatra tsara nataon’ny namantsika kosa, dia tokony hosoratana eo amin’ny vato mba hotsarovana mandrakizay ary tsy ho voakosoka intsony!"
Saingy indrisy, ny antsika ny ratsy matetika no soratana eo amin’ny vato, hany ka tonga manana FO VATO isika!